Siri bug inobvumidza kuwana mafoto uye vanobatana vasina password | IPhone nhau
Siri chengetedzo chikanganiso inobvumidza kuwana kune mapikicha uye vanobata vasina password pa iPhone 6s / Plus
Pablo Aparicio | | iPhone 6s, IPhone Kuchengetedza, Siri
Sezvatinogara tichitaura, iyo yakakwana yekushandisa sisitimu haipo. Kukanganisa kwekuchengetedza kwakawanikwa kuchikanganisa iyo yazvino iPhone mamodheru, iyo iPhone 6s uye iPhone 6s Uyezve. Dambudziko, rakawanikwa na Jose Rodriguez, inongobata zvimwe zvishandiso uye inobvumira tsvaga vatinosangana navo uye mapikicha tisingafanirwe kuisa kodhi yedu yekuchengetedza kana zvigunwe zvedu. Chinhu chakanaka ndechekuti isu tinogona kudzivirira dambudziko iri. Chinhu chakashata ndechekuti, senguva dzose, kana tikazvidzivirira, isu tinodzora ruzivo rwevashandisi.
Iyo glitch inogona kushandiswa kukumbira SiriPamwe nekudzvanya kwenguva refu bhatani rekutanga kana kushandisa rairo "Hei Siri" uye nekukumbira iwe kuti utsvage paTwitter. Kana mhedzisiro iine ruzivo rwekutaurirana rwatinogona kutaurirana narwo, senge email kero, chiratidzo chekubata che3D chingashandiswa kuvhura menyu yemamiriro pamwe nesarudzo dzekutumira email uye kuwedzera kana kugadzirisa ruzivo rwekuonana. Kubva pamatanho e3T Touch, kurova "Wedzera kune waunosangana naye" kunovhura runyorwa rwedu rwekuonana, runogona kubvumidza mukana wemifananidzo kana yakagadzirirwa.
Kuti kukanganisa uku kushandiswe, tinofanirwa kubvumidza Siri kuti iwane account yedu yeTwitter, Camera Roll, kana mamwe maapplication ane hukama, ayo anozoibvumira tsvaga uye kuratidza mhedzisiro kuburikidza neSiri. Sezvauri kuona muvhidhiyo, kuti ishande tinofanirwa kuita nhanho yapfuura: nyora tweet ine email (inogona kunge iri nhema uye kunyangwe kubva kuseva isipo, senge test@hola.es) saka kuti isu tinokwanisa kushandisa 3D chiratidzo Bata.
Maitiro ekugadzirisa iyo nyowani Siri bug
Sekutaura kunoita, "kufa imbwa, hasha dzapera." Ini handinyengedzwe nepfungwa iyi uyezve ini handisi kuzozviita, asi kana tikatadzisa Siri kubva pakakiya screen hatizonetse izvi kana mamwe matambudziko mazhinji akaonekwa, mazhinji acho anotibvumidza kuita ByPass uchishandisa Siri. Asi kune mamwe mimwe mhinduro:
Dzima Siri kuwana kwaTwitter. Tinogona kuimisa kubva kuZvirongwa / Twitter uye nekumisa Siri.
Bvisa Siri kuwana kumifananidzo kubva kuZvirongwa / Zvakavanzika / Mapikicha uye kudzora kuwana.
Chinhu chakajairwa, uye zvirizvo zvinoitika, ndezvekuti ukangobvunza Siri kuti aite iyi mhando yekutsvaga, inopindura "Kutanga iwe unofanirwa kuvhura iyo iPhone" uye usatore rimwe danho kana tikasaziva pachedu. Asi dzimwe nguva, chiyero chekuchengetedza ichi chinokundikana uye data redu rakafumurwa. Iye zvino tinofanirwa kusarudza kuti tinakirwe nemabasa ese eiyo iPhone 6s kana kudzikisira ruzivo rwedu kana tichiishandisa. Chero zvazvingaitika, kazhinji kukundikana uku yakagadziriswa mune ramangwana kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone Kuchengetedza » Siri chengetedzo chikanganiso inobvumidza kuwana kune mapikicha uye vanobata vasina password pa iPhone 6s / Plus
Hei, zvakaitika kwauri, kuti WhatsApp mumatauriro anokuudza:
«Nhaurirano uye mafoni, zvine. End-to-end encryption »pane mumwe munhu akamboitika kwauri? Kana iko kuseka kune iyo chikamu cheWhatsApp ...
Mhoro Rafael. Haisi dambe. Vaburitsa nhasi uye ndichaita maungira mumaminetsi mashoma 😉
Izvi zvinoreva kuti kusvika zvino ivo vakangonyora meseji, asi kubva nhasi vachanamatira mafoni, mavhidhiyo uye zvese. Mufungo uyu unoti iwe chete newe wekutaurirana ndiye munogona kuwana izvo zvamunogovana kuburikidza neWhatsApp
Ini ndatoiyedza senge vhidhiyo uye pandakabvunza kutsvaga mune tweter kutanga inondiudza kuvhura chishandiso ini ndine iphone 6s pamwe ne ios 9.3.1
Dambudziko iri ranga riripo kwenguva yakareba
Sezvineiwo, usabvumidze Siri kumisikidza pane yakavharirwa terminal.
Haisi kukanganisa kwekuchengetedza, sezviri nyore sekusapa Twitter mukana weSiri, nguva. Nguva dzose kuudzwa zvisirizvo
Lizz11 iri hongu kana hongu, Apple yakazvigadzirisa kubva kuSiri server, kuve fanboy hakuna kunaka kune hutano hwako.
9.7-inch iPad Pro: 12 Zvimiro Zvauchada
Izvo zvikamu zveiyo iPhone SE zvinodhura madhora zana nemakumi masere